E-Mediteraneo Molat - I-Airbnb
Molat, Zadar County, i-Croatia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Lada
I-Molat iyisiqhingi esiphakathi ne-mediterannean esinemizana engu-3 lapho abantu abangaba ngu-70 behlala khona ebusika. Ihlathini, igcwele ama-bays amahle nezindawo eziseduze ezingafinyelelwa kalula futhi ngokushesha. Kukhona ukuminyana kwezimoto ngisho nangesikhathi sonyaka.
Isiqhingi sonke sicebile ngokwedlulele ngemithi yokwelapha kanye namahlathi. Endaweni kunezindawo ezimbili zokuphumula, isitolo sekhofi, isitolo semifino, futhi ekuseni ungathenga inhlanzi esanda kukhiwa evela kubadobi bendawo.
Esiqhingini sinendawo ekahle, ulwandle oluhlanzekile ngamamitha amahlanu, isixhumanisi sesikebhe phambi kwendlu, ihlathi le-pine ngasolwandle, isitolo sekhofi ngamamitha angu-30. Ekuseni phambi kwesitolo sekhofi, kuza nombhaki one-croissant efudumele, isinkwa esisha neminye imikhiqizo yokubhaka. Ukusuka kuwo wonke amafasitela futhi nakanjani usuka ku-terrace, ungabuka ulwandle nesibhakabhaka sishintsha imibala emkhathizwe.
Ikamelo lokuphumula ngakho-ke ligcwele iminyango yengilazi esemanzini cishe engu-3M ukuphakama no-11M nxazonke ongakuvula noma ukuvale. Inzuzo ekhethekile yale ndawo iyisikhundla esihle kakhulu maqondana nomoya. Ngamanye amazwi, i-cove ivikelwe ku-Bora (NW) futhi ivela emoyeni we-jugo (SE). Ngenxa yokuthi isondelene nolwandle, ekuseni nantambama kumnandi kakhulu ngolwandle oluhle oluzolile, futhi kusukela ngo-10 ekuseni kuya ku-5 ntambama, lapho ilanga linamandla kunawo wonke liqhubeka liphephetha umoya omuhle kakhulu ukuze izinga lokushisa elingu-40 ° C lingabi mnandi.
Ulwandle luhlanzeke kakhulu futhi ungabhukuda phambi kwendlu. Ukushona kwelanga ethala, noma ogwini phambi kwendlu. Uma ufuna ukuhlukanisa amagceke ambalwa kude, kunamadwala abheke olwandle oluvulekile, azungezwe izihlahla ze-pine.